Wonke umzi omkhulu a imbali okanye imyuziyam yesayensi eyoyikekayo ukuqhekeka kwesixeko neentsuku zemvula. kunjalo, abanye kuyo baye ngokwenene iimyuziyam unique ukuba nje akufuneki ukuba awukho. Abantu zivela kulo lonke ihlabathi atyelele H.R. Geiger Museum Igruyere.
Fondue is enye izitya edume ukuba uphume Switzerland, yaye oku akukho ngozi. Abantu abadla sisi zazamazama kwembiza zoluntu kangangamakhulu eminyaka entshonalanga inxalenye isiFrentshi othetha of Switzerland. kunjalo, ku 1930 i Swiss Union isonka samasi ngamandla ethengisiweyo le ngesitya zombini kuzwelonke nakumazwe ngamazwe, ukuyibhengeza njengesitya sesizwe saseSwitzerland njengendlela yokuthengisa ukugqitha kwelizwe cheese. Kwaye siyavuya ukuba benza ezi, ngubani akayithandi sisi zaphela kunye nesonka? Ukumatanisa fondue yakho elomileyo iwayini emhlophe, kwaye uqiniseke ukuba ungaphindi kabini!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi kunye sinike nje ngetyala nesihlanganisi kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-experiences-switzerland-winter-summer%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)